Ahoana no hahalalana ny tranga fifindra-monina isa - Fifindrà-Monina
tsy afaka mifandray amin'ny iPhone hotspot
mikatso ny bokotra heriko iphone
iphone lamba mainty misy kodiarana mihodina
ity fitaovana ity dia mety tsy ho tohanana
Ahoana no hahalalana ny trangam-pifindra-monina NUMBER?
Ahoana no hahalalana ny trangam-pifindra-monina NUMBER? . Ho hitanao ny rohy mankany Toetran'ny raharaha an-tserasera eo amin'ny pejy lehibe an'ny www.nanohide.gov/es
Ahoana ny fomba hijerena ny tranga momba ny fifindra-monina. Ny pejy misy ny My Case Status Online dia mampiseho fitaovana mora ampiasaina hafa, toy ny fanovana ny adiresinao amin'ny fomba elektronika, ny fomba fandefasana fanadihadiana momba ny raharahanao (e-Fangatahana), hahazoana ny fotoana fanodinana USCIS, ary ny fomba fitadiavana birao. USCIS toerana , safidy izay hodinihintsika amin'ny lahatsoratra manaraka ato amin'ity bilaogy ity.
Toetran'ny raharaha fifindra-monina . Mba hanamarinana ny raharahanao amin'ny alàlan'ny rafitra elektronika dia tsy maintsy manana ny laharana fahazoana ny raharaha . Ity nomeraon'ny tapakila ity dia mampiavaka azy manokana 13 endri-tsoratra fa USCIS dia manome ny fangatahana tsirairay na ny fanangonan-tsonia azony , ary ampiasaina hanarahana ny tranga.
Ny nomeraon'ny tapakila dia misy litera telo arahin'isa folo . Ireo litera telo dia mety, ohatra, EAC, WAC, LIN, SRC, NBC, MSC, na IOE. Afaka mahita izany ianao amin'ny fanamarihana nalefan'i USCIS anao momba ny trangao.
Raha manapa-kevitra ny hampiasa ny nomeraonao ianao handinihana ny satan'ny tranga misy anao sy hanaraha-maso ny fizotrany, misy zavatra maromaro hodinihina:
Mandritra ny ankamaroan'ny fotoana dia miandry ny raharaham-pitsarana anao, dia efa an-dàlana ny raharaha napetraka teo aloha. Noho izany dia mety tsy hiova ny satan'ny raharaha raha tsy efa tonga amin'ny faran'ny fotoana fikarakarana mahazatra.
Ny tena tanjona dia ny fanodinana ireo tranga eo noho eo, ny fampahalalana izay atolotray amin'ny alàlan'ny rafitra no tena fototra. Raha mbola ao anatin'ny ora fanodinana ara-dalàna ny tranga, ny rafitra mandeha ho azy dia hanome anao fampahalalana ankapobeny fotsiny.
Ny mpanjifa izay manana tarehimarika iray ihany no manana ny fahaizany manara-maso ny tranga misy azy ireo. Ny tranga hafa rehetra dia horaisina amin'ny alàlan'ny kaonty kaonty, izay matetika antsoina hoe ny isa A. Manomboka amin'ny A izany, ary aorian'ny nomerao valo na sivy isa. Amin'ireto tranga ireto dia azo arahi-maso ny ora fanodinana, fa tsy azo fehezina ny fanodinana tranga manokana.
Ahoana ny fomba fanodinana tranga
Amin'ny ankapobeny, ny serivisy amerikanina mizaka zom-pirenena sy ny fifindra-monina (USCIS) dia manamboatra tranga arakaraka ny nandraisana azy ireo, mba hanaraha-maso izany dia misy pejy iray ihany koa izay mampiseho ny ora voatondro isaky ny birao, izay miova arakaraka ny karazana tranga tsirairay, ny ny vaovao dia havaozina isam-bolana (manodidina ny faha-15 isam-bolana), na dia mety hiova koa aza ireo fampahalalana ireo raha tsy misy fampandrenesana mialoha.
Mba hahitana ny ora fanodinana ny raharaha dia mila mahafantatra ianao:
Ny birao mikarakara ny raharaha.
Ny karazana endrika natolotra.
Ny daty nahazoanao ny raharaha.
Azonao atao ny mahita izany fampahalalana izany ao amin'ny Fanamarihana momba ny fandraisana.
Miditra amin'ny tranokalan'ny Fotoana fanodinana , ampiasao ny safidin'ny menio, tadiavo ny birao eo an-toerana na ivon-toerana fanompoana izay mitantana ny karazana tranga mahaliana anao. Kitiho avy eo ny Daty fanodinana.
Hiseho ny latabatra iray mampiseho anao ny laharana endrika, ny anaran'ny endrika ary ny ora fanodinana na fetr'andro ho an'ireo endrika rehetra izay voahodina ao amin'io birao io. (Mariho tsara fa tsy ny birao rehetra no mandrindra ny fangatahana sy ny fangatahana rehetra.)
Pejin-trano an-tserasera ny toerako. Alohan'ny hanamarinana ny satan'ny tranga misy anao dia mamporisika anao izahay hamaky ny politikan'ny tsiambaratelo USCIS izay hita eto ambany ny bokotra Check Status.
Rehefa mampiditra ny nomeraon-toeranao ianao dia tsy maintsy esorinao ireo takelaka (-), fa azonao atao ny mampiditra tarehin-tsoratra hafa rehetra, ao anatin'izany ny asterisk (*) raha ao anatin'ny nomeraony.
Ampidiro ny nomeraon'ny tapakila. Omit hyphens, fa asio tarehin-tsoratra hafa, ao anatin'izany ny asterisk, raha tafiditra ao amin'ny nomeraony.
Ny rafitra elektronika dia hampiseho ny hetsika farany natao taminao ary hilaza aminao ny dingana manaraka tokony hatao, raha ilaina izany. Izy io koa dia hanome anao fampahatsiahivana mahasoa mba hitazomana ny adiresinao ho vaovao sy ny fomba fandefasana fanontaniana. Hitanao ve fa mora sy mahasoa ny manamarina ny satan'ny raharaha?! Zarao amin'ny fianakavianao sy ny namanao!
Ahoana ny fomba hanoratana taratasy ho an'ny mpitsara mpifindra monina?
Resadresaka momba ny fifindra-monina ho an'ny zom-pirenena
Ohatra iray amin'ny taratasin'ny famelan-keloka amin'ny fifindra-monina - ...
Iza no mahafeno fepetra amin'ny fisintahana mpifindra monina?
Inona ny nomeraon'ny visa?
Ahoana no hahalalana raha manana taratasy fampisamborana ampiasain'ny olona aho?